सुन्दरता र त्यससँग जोडिएको प्रश्नबारे बहस – Kathmandutoday.com
सुन्दरता र त्यससँग जोडिएको प्रश्नबारे बहस
काठमाण्डु टुडे २०७१ फागुन १३ गते १०:१० मा प्रकाशित
कसैले तपाईलाई सोध्यो, ‘कस्ता केटी मन पर्छन् ?’ तपाई के भन्नु हुन्छ ? पक्कै पनि सुन्दर र राम्रा केटी । सुन्दरता भन्ने चिज नै यस्तो छ जसले सबैलाई आकर्षित गर्छ । जसलाई हेरेर हामी आननद महसुश गर्दछौँ । सुन्दर र राम्रा कुरा मन नपर्ने पनि कोही हुदैनन् । सुन्दर र आकर्षक महिलाका लागि संभावनाका धेरैे ढोकाहरु पनि खुल्ने गर्छन् । फिल्म र मोडलिङ जस्ता सौन्दर्यताले महत्व राख्ने क्षेत्रमा उनीहरुको ठूलो महत्व रहने नै गर्छ । यो भन्दा आजभोली त कतै जागिर खान जानु परेमा पनि राम्रालाई छान्ने परम्पराको विकास हुँदै गएको छ । चाहे त्यो आकर्षणका लागि होस् चाहे जे का लागि । यसको प्रवाभ हाम्रो नेपाली समाजमा पनि परेको देख्न सक्छौ हामी । एयरहोस्टेस, रिसेप्सनिस्ट, वेटर जस्ता पदका लागि सुन्दर र आकर्षक केटी राख्ने चलन हाम्रो नेपाली समाजमा मौलाउँदै गएको छ ।
पुरुषहरुले आँखा लगाउने, जिस्काउने, छेडछाड गर्ने, मन पराउँछु भन्नेको अग्र पंतिमा पनि सुन्दर र आकर्षक महिलाहरु नै पर्दछन् । यहाँ मन हेरेर मायाँ गर्नेहरु भन्दा पनि रुपरंग हेरेर मायाँ गर्नेहरुको जमात धेरै देख्न सक्छौँ हामी । के सुन्दरता हाम्रो सिप हो ? यात कुनै कला नै हो ? पक्कै पनि सुन्दरता न त कुनै सिप नै हो, न त कुनै कला नै । यो त प्रकृतिले दिएको रुप यात त बरदान । जहाँ कोही सुन्दर हुन्छन् त कोही कुरुप । भन्ने गरिन्छ मानिस सुन्दर भएर के भयो त, जब उसको मन नै सफा छैन भने त्यो सुन्दरताले कुनै महत्व राख्ने गर्दैन । यहाँ आफ्नो सुन्दरता प्रति घमण्ड गर्नेहरु पनि धरै भेटिन्छन् । भने सुन्दर नभएकोमा निरास हुनेहरुको पनि कुनै कमी छैन । तर के सुन्दर हुनु साच्चि फइदाजनक छ त ? यही विषयमा कुरा गरौँ है त ।
युनिभर्सिटी अफ कोलोराडो डेनभर विजनेस स्कूलले एक अध्धययन गर्दै भनेको छ । ‘राम्री महिलालाई रोगगारीका केही अवसरहरुमा प्रवेश निषेदको व्यवहार गरिन्छ ।’ अनुसन्धान तथा अन्वेषण, वित्त, इन्जिनियरिङ, सेक्युरिटी तथा निमार्णसम्बन्धि काममा उनीहरुलाई लिइदो रहेनछ । राम्रो हुनु त फाइदाजनक मात्र रहेनछ नि भन्ने प्रश्न यहाँनिर खडा हुन्छ । राम्री केटीलाई सबैले आँखा लगाउने, जिस्क्याउने, उसप्रति खराव नजर राख्ने, मन पराउने नाममा दुःख दिने जस्ता गतिबिधी हाम्रै समाजमा हुने गर्छन् । सुन्दरता भन्ने कुरा कसैसँग कम होला, कसैसँग बढी होला यात कसैसँग नहोला तर मन भन्ने कुरा त सबैसँग भएकै कुरा हो । महत्वपूर्ण कुरा त्यो हो जसको अनुहार होइन मन सुन्दर होस् र उसले अरुलाई पनि सुन्दरता छर्न सकोस् ।
महिलाहरु सुन्दर देखिनका लागि के नै गर्दैनन् । व्युटी पार्लरदेखि लिएर, मेकअपका थुप्रै सामानहरु प्रयोग गर्छन् उनीहरु । भनाइृ नै छ नी पाप धोएर पखालिदैन । हो त्यस्तै हामीले अनुहारलाई जति चम्किलो पार्न खोजेपनि त्यो त्यस्तै भइरहन्छ । आधुनिक प्रविधीको प्रयोगसँगै बजारमा आएका विभिन्न उपयोगी वस्तुहरले तपाई सुन्दर पनि देखिनुहोला तर के त्यसले तपाईको मन सुन्दर बनाउन सक्छ त ? हामीले अनुहारको सुन्दरता हाइन आफ्नो मनलाई सुन्दर बनाउन सक्यौँ भने सबैको माया पनि पाउँछौ र सम्मान पनि । अनुहार राम्रो तर तपाई घमण्डी, तपाई जिद्दी, तपाई स्वार्थी अनि कस्ले राम्रो मान्ने तपाईलाई अनि कहिलेसम्म ? त्यसैले मन सफा, स्वच्छ र सुन्दर भउमा अनुहारको सुन्दरताको कुनै अर्थ रहदैन । ज्ञान, शिप, कला र प्रतिस्पर्धा गर्न सके जो कोही पनि, जुन कुनै पनि क्षेत्रमा सफल हुनसक्छ । माथि दिइएका उदाहरण सुन्दरता हुनु र नहुनुलाई दोष दिन खोजिएको होइन । कही, कुनै स्थानमा लागु होलान् ती कुरा तर तपाईले आफ्नो क्षमता अभिबृद्दि गर्दै जमने र साच्चिनै अनुहारको सुन्दरता भन्दा मनको सुन्दरतालाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने हो भने जित तपाईकै हुनेछ । आजैदेखि ऐना हेर्न छाडेर सहयोग तथा सेव गर्न, दक्षता अभिबृद्दी गर्न, सबैलाई माया साट्न, घमण्ड र स्वार्थ त्याग्न तर्फ लाग्ने कि ? अनि हुनुहुनेछ तपाई साच्ची नै सुन्दर । अनि मन पर्नेछन् सबैलाई सुन्दर केटी जो तपाई आफै हुनुहुनेछ । हो सबैले भन्नेछन् तपाईलाई उनी त साच्ची सुनदर छिन्, अनि पर्नेछैन तपाईलाई ऐना हेर्न ? मनको आँखाले महशुस गर्नुहुनेछ आफ्नो सुन्दरतालाई ।